Kuzvarwa kwaMozisi (1-4)
Mwanasikana waFarao anotora Mozisi (5-10)
Mozisi anotizira kuMidhiyani uye anoroora Zipora (11-22)
Mwari anonzwa kuchema kwevaIsraeri (23-25)
2 Mumazuva iwayo, mumwe murume weimba yaRevhi akaroora mwanasikana wedzinza raRevhi.+ 2 Uye mukadzi wacho akava nepamuviri, akabereka mwanakomana. Paakaona kunaka kwaakanga akaita, akamuvanza kwemwedzi mitatu.+ 3 Paakanga asingachakwanisi kumuvanza,+ akatora tswanda* yenhokwe, akainama netara,* uye akaisa mwana wacho mukati, akaiisa pakati petsanga dzaiva kumahombekombe kweRwizi rwaNire. 4 Asi hanzvadzi yake+ yakamira nechekure kuti ione zvaizoitika kwaari. 5 Mwanasikana waFarao paakadzika kuna Nire kunogeza, vashandikadzi vake vaifamba vachitevedza Nire. Akaona tswanda yacho iri pakati petsanga. Akabva atuma murandasikana wake kuti aitore.+ 6 Paakaivhura, akaona muine mwana mukomana, uye mwana wacho aichema. Akasiririswa naye, asi akati: “Mwana wevaHebheru uyu.” 7 Hanzvadzi yake yakabva yati kumwanasikana waFarao: “Ndiende ndinokushevedzerai mukadzi wechiHebheru anoyamwisa kuti akurererei mwana wacho here?” 8 Mwanasikana waFarao akati kwaari: “Enda!” Musikana wacho akabva aenda akanoshevedza amai vemwana wacho.+ 9 Mwanasikana waFarao akabva ati kwavari: “Enda nemwana uyu undirerere, uye ndichakubhadhara.” Saka mukadzi wacho akatora mwana wacho, akanomurera. 10 Mwana wacho paakanga akura, mukadzi wacho akaenda naye kumwanasikana waFarao, uye akava mwanakomana wake.+ Akamutumidza kuti Mozisi* uye akati: “Nekuti ndakamunyurura mumvura.”+ 11 Rimwe zuva Mozisi paakanga ava munhu mukuru,* akabuda kuti anoona basa rinorema raiitwa nehama dzake,+ ndokuona mumwe muIjipiti achirova muHebheru, mumwe wehama dzake. 12 Saka akatarisa-tarisa uye paakaona kusina munhu, akauraya muIjipiti wacho, ndokumuviga mujecha.+ 13 Asi mangwana acho akabudazve, akaona varume vaviri vechiHebheru vachirwa. Saka akati kune akanga akanganisa: “Uri kuroverei mumwe wako?”+ 14 Iye akabva ati: “Ndiani akakugadza kuti uve muchinda uye mutongi wedu? Uri kuda kundiuraya sezvawakaita muIjipiti uya here?”+ Mozisi akatanga kutya akati: “Chokwadi nyaya iya yazivikanwa!” 15 Farao akabva azvinzwa, uye akaedza kuuraya Mozisi; asi Mozisi akatiza Farao akaenda kunyika yeMidhiyani,+ uye akasvikogara pasi pedyo netsime. 16 Zvino mupristi weMidhiyani+ akanga aine vanasikana vanomwe, uye vakauya kuzochera mvura nekuzadza zvinwiro kuti vanwise makwai ababa vavo. 17 Asi vafudzi vakauya vakavadzinga sezvavaigara vachiita. Mozisi akabva asimuka akabatsira* vakadzi vacho, uye akanwisa makwai avo. 18 Pavakadzoka kumba, baba vavo Reueri*+ vakati: “Sei nhasi makurumidza kudzoka?” 19 Vakapindura kuti: “Mumwe murume wechiIjipiti+ atinunura pavafudzi, uye atoticherera mvura nekunwisa makwai.” 20 Akati kuvanasikana vake: “Saka ari kupi? Mamusiyirei? Mushevedzei tidye naye.” 21 Pashure paizvozvo Mozisi akabvuma kugara nemurume wacho, uye murume wacho akamupa mwanasikana wake Zipora+ kuti ave mudzimai wake. 22 Akazobereka mwanakomana, akamutumidza kuti Geshomu,*+ nekuti akati, “Ndava kugara mune imwe nyika ndiri mutorwa.”+ 23 Pashure penguva yakareba* mambo weIjipiti akazofa,+ asi vaIsraeri vakaramba vachigomera nemhaka yeuranda uye vachinyunyuta, uye kuchema kwavo nemhaka yeuranda kwakaramba kuchikwira kuna Mwari wechokwadi.+ 24 Mwari akazonzwa kugomera kwavo,+ uye Mwari akayeuka sungano yake naAbrahamu, Isaka, naJakobho.+ 25 Saka Mwari akatarisa vaIsraeri; uye Mwari akavarangarira.
^ Kana kuti “areka.”
^ Kana kuti “nebhitumini.”
^ Kureva kuti “Akanyururwa,” zvichireva kuti akaponeswa kubva mumvura.
^ Kana kuti “paakanga achiva munhu ane simba.”
^ Kana kuti “akanunura.”
^ ChiHeb., “pemazuva akawanda.”